संवेदनशील मतदानस्थलमा विशेष निगरानी- मधेस - कान्तिपुर समाचार
संवेदनशील मतदानस्थलमा विशेष निगरानी
उत्तरी चुरे क्षेत्रदेखि भारतीय सीमासम्म जोडिएको मतदान केन्द्रमा सुरक्षा बलियो बनाइँदै
वैशाख २८, २०७९ मधेस ब्युरो
जनकपुर — मधेस प्रदेशका अति संवेदनशील र संवेदनशील मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीको विशेष निगरानी बढाइएको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका केही मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको भन्दै त्यहाँ विशेष तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई खटाइएको हो ।
सिरहामा ४ सय ९८ मतदान केन्द्र तोकिएको छ । जिल्लाका ८ नगरपालिका र ९ गाउँपालिका गरी १७ स्थानीय तहका मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटिसकेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्रमुख इन्दिरा यादवका अनुसार उत्तरी चुरे क्षेत्रदेखि भारतीय सीमासम्म जोडिएको मतदान केन्द्रमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी चार दिनअगावै पठाइएको हो । जिल्ला सुरक्षा समितिले सबै मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । सिरहाका प्रहरी प्रमुख एसपी अर्जुन तिमिल्सिनाले त्यहीअनुरूप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको जानकारी दिए ।
अघिल्लो पटक दलहरूबीच झडप तथा निर्वाचन प्रभावित गर्न गरिएको आपराधिक क्रियाकलापका आधारमा सर्लाहीको २० स्थानीय तहको मतदानस्थललाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले भौगोलिक विकटता, यातायातको असुविधा भएका मतदानस्थललाई पनि संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ । जिल्लाका २० वटा पालिकामा कुल ३ सय १८ मतदानस्थल तोकिएको छ, जसमा ५ सय ९९ मतदान केन्द्र राखिएको छ । तीमध्ये १ सय ३ मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ, जसमा २ सय ५ मतदान केन्द्र छन् । अति संवेदनशील मतदानस्थलहरू अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ३ र ४ का छन् । जिल्लामा १ सय ८४ मतदानस्थल संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ, जहाँ ३ सय ३९ मतदान केन्द्र छन् । सुरक्षा समितिले जिल्लाको ३१ मतदानस्थल मात्र सामान्यको सूचीमा राखेको छ ।
मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको सुरक्षा समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले बताए । ‘विगतको निर्वाचनमा भएको झडप तथा आपराधिक क्रियाकलापका आधारमा हामीले मतदानस्थलहरूलाई तीन चरणमा विभाजन गरेका छौं, संवेदनशील र अति संवेदनशील मतदानस्थलमा सोहीअनुसारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘स्वच्छ निर्वाचनका लागि भौगोलिक विकटता र यातायातको असुविधालाई पनि हामीले ख्याल गरेर सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएका छौं ।’ यसअघिको निर्वाचनमा सर्लाहीमा ३ सय १८ मतदानस्थलमा ५ सय १८ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो । यसपटक ५ सय ९९ मतदान केन्द्र तोकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । मतदाताको संख्या बढेकाले ८१ मतदान केन्द्र थप गरिएको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख दिवाकर भुजेलले बताए ।
रौतहटका २ सय ७६ मतदान स्थलमध्ये ८३ वटा अति संवेदनशीलको सूचीमा छन् । संवेदनशील मतदानस्थल १ सय १९ वटा छन् । विप्लव माओवादीको गतिविधि हुने क्षेत्र र केही विकट मतदान केन्द्रलाई सुरक्षा समिमिले अति संवेदनशीलको सूचीमा राखेको छ । जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहमा ५ सय १८ वटा मतदान केन्द्र छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले अति र संवेदनशील क्षेत्रको मतदानस्थको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने बताए । ‘कुनै किसिमको हर्कत नहोस् भनेर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘मतदातालाई भयरहित र ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण बनाउँछौं ।’ जिल्लामा बाहिरबाट झन्डै ६ सय थप सुरक्षाकर्मर् ीझिकाइएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका विभिन्न पालिका र भूगोलको विकटता, यातायातको असुविधा र चुरेसँग जोडिएको स्थानलाई अति संवेदनशील मतदान स्थलको सूचीमा स्थानीय प्रशासनले राखेको हो । प्रजिअ शाहीले भारतसँग जोडिएका राजदेवी, गौर, इशनाथ, परोहा, बौधीमाई, चुरेसँग जोडिएका चन्द्रपुर नगरपालिकासहित १४ पालिकाका ८३ वटा मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको बताए । बारामा पनि मतदान अधिकृतलाई कार्यस्थलमा खटाउन थालिएको छ । निर्वाचन सामग्री जिम्मा लगाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन अधिकृतलाई मंगलबार बोलाएको छ । पालिकापिच्छे मतदान अधिकृतहरूलाई मतपत्र, मतपेटिका, स्वस्तिक चिह्नलगायतका सामग्रीको व्यवस्थान व्यवस्थापन भइरहेको निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख सरोज चौधरीले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका २ उपमहानगर, ५ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकामा गरी कुल मतदाता ४ लाख २३ हजार ३ सय ३८ जना छन् । यहाँ ३ सय ३ मतदान स्थल र ५ सय ४१ मतदान केन्द्र छन् ।
सिम्रौनगढ र पचरौता नगरपालिकालाई अति संवेदनशील मानिएको जिल्ला सुरक्षा समिति स्रोतले बतायो । सीमावर्ती जिल्लाका विश्रामपुर, फेटा, कलैया, देवताल, सुवर्ण, पचरौता र सिम्रौनगढ गरी ७ वटा पालिकाहरूलाई संवेदनशील मानिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटुवालले बताए । जिल्लाको अधिकांश मतदान केन्द्रहरू विद्यालयमा छन् । ‘अति संवेदनशील, संवेदनशील र समान्य संवेदनशील गरी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने ।
सप्तरीका १२ वटा मतदानस्थल चौरमै राखिएको छ । सार्न खोजिए पनि स्थानीयले अपायक पर्ने भनेपछि बाध्य भएर चौरमै राख्नुपरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार जोशीले जानकारी दिए । ‘अघिल्ला निर्वाचनमा पनि ती मतदानस्थल चौरमा नै थियो, सार्न खोजिएको हो तर स्थानीयको विरोधपछि सकिएन,’ जोशीले भने । तीबाहेक अन्य मतदानस्थल विद्यालय भवनमै राखिएको उनले बताए । जिल्लामा अधिकांश मतदानस्थल अति संवेदनशील सूचीमा छन् । ४ वटा मतदानस्थल मात्र सामान्य अवस्थाको रहेको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी अभिनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । जिल्लामा कुल २ सय ९७ मतदानस्थ्लमा ५ सय ८० मतदान केन्द्र तोकिएको छ । एसपी काफ्लेका अनुसार ८५ वटा संवेदनशील र २ सय ८ वटा मतदानस्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा छन् । सोमबारसम्ममा ७७ वटा हतियार जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी इकाइमा बुझाइएको छ । जिल्लाभरि ५ सय बढी इजाजतप्राप्त बन्दुक रहेकोमा थोरै संख्यामा मात्रै हतियार बुझाइएको छ ।
एक महानगरपालिका र तीनवटा नगरपालिकासहित १३ स्थानीय तह रहेको पर्सामा आसन्न निर्वाचनका लागि १ सय ६७ मतदानस्थल र ४ सय ४ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार वीरगन्जमा सबैभन्दा बढी मतदान स्थल र मतदान केन्द्र राखिएका छन् । महानगरमा ५५ वटा मतदानस्थल र १ सय ४३ वटा मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको निर्वाचन कार्यालय पर्साकी प्रमुख रञ्जिता झाले बताइन् । यसैगरी सबैभन्दा कम पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा मतदानस्थल राखिएका छन् । पकाहामैनपुरमा ६ वटा मतदानस्थल र १५ वटा मतदान केन्द्र छन् ।
जिल्ला निर्वाचन प्रमुख झाले मतदान केन्द्रलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका दृष्टिकोणले ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको जनाइन् । ‘मतदान केन्द्रमा पर्खाल नभएकालाई अति संवेदनशीलमा राखिएको छ,’ उनले भनिन् । संवेदनशील मतदानस्थलको विवरण प्रशासनसँग रहेको उनले बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले सुरक्षाका दृष्टिकोणका कारण संवेदनशील मतदान केन्द्रको विवरण मिडियामा दिन नमिल्ने बताए । ‘सबै मतदान केन्द्रको हामीले वर्णीकरण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सुरक्षाको दृष्टिकोणले बाहिर भन्न मिल्दैन ।’
- भरत जर्घामगर (सिरहा), अवधेश झा (सप्तरी), ओमप्रकाश ठाकुर (सर्लाही), शिव पुरी (रौतहट), लक्ष्मी साह (बारा) र शंकर आचार्य (पर्सा)
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ १३:०२
मनाङ छिर्ने यात्रुलाई नाकामा सोधपुछ
वैशाख २८, २०७९ आश गुरुङ
लमजुङ — निर्वाचनका बेला मनाङ आएका स्थानीयलाई जिल्ला प्रवेश गर्ने नाकामा प्रहरीले सोधपुछ गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । प्रहरीले मनाङ प्रवेश नाका तालडाँडामा अनावश्यक सोधपुछ गर्ने र दुःख दिने गरेको जिल्ला प्रवेश गर्ने स्थानीयले बताए ।
‘हामीलाई काठमाडौंबाट आउँदा धादिङ, तनहुँ, लमजुङमा कुनै दुःख भएन । आफ्नै गाउँमा आउँदा चाहिँ गाडीबाट ओराल्यो । नाम लेखायो । कहाँ जान लागेको ? किन जान लागेको भनेर सोध्यो‚’ एक यात्रुले भने, ‘हामी त भोट हाल्न आएका हौं । सरासर जान नदिई किन यसरी दुःख दिने ?’
प्रतिनिधि सभा सांसद पोल्देन छोपाङ गुरुङले मनाङ प्रवेश नाका म्यार्दी कटेपछिको तालडाँडामा अनावश्यक सोधपुछ गरेको र मनाङमा आउने मतदातालाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो आएको बताए । ‘यसअघि जिल्ला प्रवेशद्वारमा यात्रु संख्या सोध्ने र गाडीको नम्बर टिप्ने गरिन्थ्यो । कहाँ जाने भनेर सोधपुछ गरेपछि छाडिन्थ्यो‚’ उनले भने, ‘अहिले त कहाँ केका लागि ? कुन ठाउँ जाने ? कहाँ जाने ? किन जाने ? गाडीमा के छ ? तपाईंहरूसँग के छ भनेर केरकार गर्दा रहेछन् ।’
उनका अनुसार अहिले मतदान गर्न काठमाडौंबाट मतदाता आइरहेका छन् । मतदातालाई सहजीकरण गरी राम्रो सेवा दिनुपर्नेमा प्रहरीले नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिएको उनले बताए । उनका अनुसार काठमाडौंबाट केही ढिला आइपुगेका स्थानीयलाई प्रहरीले झन् दुःख दिने गरेको छ । ‘काठमाडौंबाट आउँदा साँझ ७/८ बज्छ । सुरक्षा दिएर गन्तव्यमा पुर्‍याउनुको सट्टा जान पाइँदैन; गाडीमा बास बस्नुपर्छ भन्ने रहेछन् । मसँग गुनासो आउँछ‚’ उनले भने ।
सीमा प्रहरी चौकी तालका असई तेजबहादुर चौधरीका अनुसार चुनावमा साविकभन्दा केही कडाइ गरिएको बताए । ‘हामीले चुनावका बेला कति भित्रिन्छन् भनेर सोधपुछ गरेका छौं । यो माथिकै आदेश हो‚’ उनले भने । उनका अनुसार दैनिक ४० वटासम्म यात्रुवाहक जिप मनाङ आउने गरेका छन् । केही दिनयता दैनिक डेढ सयदेखि २ सय यात्रु मनाङ भित्रिएको अनुमान छ । यसमा केही पर्यटक पनि छन् । ‘हामीले दैनिक चेक गरिरहेका छौं । चुनावलाई मध्यनजर गरेर केही कडाइ त गर्नै पर्‍यो‚’ उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविन्द्रप्रसाद आचार्यले प्रहरीले चेकजााच गर्दा दुःख मान्न नहुने बताए । ‘दिन‚ रात‚ साँझ हुन्छ । कति यात्रु छन् भन्नै पर्‍यो । चुनावको बेला छ । अलि अलि त चेकजाँच गर्नै पर्‍यो‚’ उनले भने, ‘मनाङ शान्त जिल्ला हो । सबै मनाङका नागरिक मात्रै नहुन सक्छन् भनेर हो ।’ उनले चुनावको बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जाँचलाई केही कडाइ पारिएको तर मनाङका नागरिकलाई दुःख दिन नभई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न कडाइ गरिएको बताए ।
नेपालमै सबैभन्दा कम ६ हजार ४ सय ९६ मतदाता मनाङमा छन् । सदरमुकाम चामेदेखि ३ दिनसम्म हिँड्नुपर्ने ठाउँमा समेत मतदाता पुग्नुपर्छ ।
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ १३:०१